Amanqanaba amathandathu ohambo lomthengi we-B2B | Martech Zone
NgoMvulo, Februwari 1, 2021 NgeCawa, ngoFebruwari 7, 2021 Douglas Karr
Bekukho amanqaku amaninzi kuhambo lomthengi kule minyaka imbalwa idlulileyo kunye nendlela amashishini afuna ngayo ukutshintsha ngokwamanani ukulungiselela utshintsho kwindlela yokuziphatha komthengi. Amanqanaba umthengi ahamba kuwo abaluleke kakhulu kuthengiso lwakho lonke kunye nesicwangciso sokuthengisa ukuze uqiniseke ukuba ubonelela ngolwazi kubathengi okanye kubathengi nokuba bayifuna nini kwaye nini.
In Uhlaziyo lwe-CSO lukaGartner, Benza umsebenzi omnandi wokwahlulahlula kunye nokuchaza indlela abathengi be-B2B abasebenza ngayo ukusuka kulo mbandela ukuya kuthenga isisombululo. Ayisiyo intengiso umgca ukuba iinkampani ezininzi zamkele kwaye zilinganise ngokuchaseneyo. Ndingakhuthaza wonke umntu ukuba abhalise kwaye akhuphele ingxelo.
Khuphela: Uhambo olutsha lwe-B2B lokuthenga kunye nefuthe lalo kwiNtengiso
Amanqanaba oTyelelo lweB2B
Ukuchongwa kwengxaki -Ishishini linomcimbi abazama ukuwulungisa. Umxholo osinikayo kwesi sigaba kufuneka ubancede bayiqonde ngokupheleleyo ingxaki, iindleko zembutho kumbutho wabo, kunye nembuyekezo kutyalo-mali lwesisombululo. Okwangoku, abakhange bakhangele iimveliso okanye iinkonzo zakho- kodwa ngokubakho kwaye ubabonelele ngobuchule ukuze bachaze ngokupheleleyo ingxaki yabo, sele ukhokelela ngaphandle kwesango njengomboneleli wesisombululo.
Isisombululo sokuKhangela -Ngoku ukuba ishishini liyayiqonda ingxaki yalo, ngoku kufuneka bafune isisombululo. Kulapho intengiso, ukukhangela kunye nemithombo yeendaba kwezentlalo zibalulekile kumbutho wakho ekunxibelelanwa nawo. Kuya kufuneka ubekhona kukhangelo olunomxholo omangalisayo oya kuthi ubonelele ngethemba lokudingeka kwesisombululo sakho. Kuya kufuneka uneqela lokuthengisa elihambileyo kunye nabameli abakhoyo apho amathemba akho kunye nabathengi bacela ulwazi kwimidiya yoluntu.
Izakhiwo zokwakha -Ishishini lakho akufuneki lilinde isicelo sesindululo sokuchaza ukuba unceda njani ukufezekisa iimfuno zabo. Ukuba unganceda amathemba akho kunye nabathengi babhale iimfuno zabo, unokuhamba phambili kukhuphiswano lwakho ngokuqaqambisa amandla kunye nezibonelelo ezongezelelweyo zokusebenza nombutho wakho. Le yindawo endihlala ndijolise kuyo kubaxhasi esiye sabanceda. Ukuba wenza umsebenzi onzima wokubanceda ukuba benze uluhlu lokutshekisha, baqonde amaxesha abekiweyo, kwaye balinganise ifuthe lesisombululo, uza kulandelelwa ngokukhawuleza entlokweni yoluhlu lwezisombululo.
Ukhetho loMthengisi -Iwebhusayithi yakho, ukukhangela kwakho, ubukho bakho kwimidiya yoluntu, ubungqina babathengi bakho, iimeko zakho zokusebenzisa, ukubonakala kobunkokeli bakho, iziqinisekiso zakho, izixhobo zakho, kunye nokwamkelwa kweshishini konke oku kunceda ekubekeni ithemba lakho likhulule banqwenela ukwenza ushishino. Inkampani yakho yobudlelwane noluntu kufuneka ibe ngaphezulu kokuqinisekisa ukuba uhlala ukhankanywa kupapasho loshishini njengomthengisi owaziwayo weemveliso kunye neenkonzo abathengi abaphanda ngazo abathengisi. Abathengi beshishini banokuhamba nesisombululo esingafikeleli kuzo zonke iimpawu zokukhangela… kodwa bayazi ukuba bangathemba. Eli linqanaba elibalulekileyo kwiqela lakho lentengiso.
Ukuqinisekiswa kwesisombululo - Abameli bophuhliso loshishino (BDRokanye abameli bophuhliso lwezisombululo (SDR) ziinkosi kulungelelwaniso lweemfuno zabathengi kunye nokuseta ulindelo kumandla abo okuhambisa isisombululo. Izifundo zamatyala ezihambelana nomzi-mveliso wakho kunye nokuvuthwa kubalulekile apha ukuvumela ithemba lakho libone ukuba isisombululo sakho sinako ukusombulula ingxaki yabo. Iinkampani ezinemithombo zinokutyala imali kwiiprototypes ngeli xesha ukuvumela ithemba ukuba libone ukuba bacinge ngesisombululo.
Ukudalwa kwemvumelwano Kwishishini, kunqabile ukuba sisebenze kunye nomenzi wezigqibo. Rhoqo kunoko, isigqibo sokuthenga sishiywa kwimvumelwano liqela lobunkokeli emva koko samkelwe. Ngelishwa, amaxesha amaninzi asinakho ukufikelela kwiqela liphela. Abameli bokuthengisa abaqolileyo bakuqonda kakuhle oku kwaye banokuqeqesha ilungu leqela malunga nendlela yokuveza isisombululo, umahluko kwishishini labo kukhuphiswano, kwaye bancede iqela liphumelele kwinkqubo yokuvunywa.
Ezi nqanaba azihlali zihamba ngokulandelelana. Amashishini ahlala esebenza kwinqanaba elinye okanye nangaphezulu, batshintshe iimfuno zabo, okanye bandise okanye banciphise ukugxila kwabo njengoko beqhubela phambili ekuthengeni. Ukuqinisekisa ukuba ukuthengisa kunye nentengiso yakho ilungelelanisiwe kwaye iyatshintsha ukulungiselela olo tshintsho kubalulekile kwimpumelelo yakho.
Ukuhamba ngentla kuhambo lwabathengi bakho
Abathengisi abaninzi be-B2B banciphisa ukubhengezwa kweenkampani zabo kubaxhamli beenkonzo ngokujolisa ekubonakaleni kwabo kokufunyanwa njengomthengisi onokubonelela ngemveliso okanye inkonzo. Isicwangciso esilinganiselweyo kuba abekho ngaphambili kumjikelo wokuthenga.
Ukuba ishishini liphanda umceli mngeni abanalo, abafuni kukhangela inkampani yokuthengisa imveliso okanye inkonzo kubo. Uninzi lwamanqanaba ohambo lokuthenga lwe-B2B alwandulelayo Ukukhetha umthengisi.
Umzekelo kwimeko; mhlawumbi kukho umntu oza kuba ngumthengi osebenza kwiTekhnoloji yezeMali kwaye angathanda ukudibanisa amava aselfowuni kunye nabathengi babo. Banokuqala ngokuphanda icandelo labo kunye nendlela abathengi okanye abo bakhuphisana nabo ababandakanya ngayo amava ashukumayo kumava abo kubathengi.
Uhambo lwabo luqala ngophando lokwamkelwa okuhamba nomnxeba nokuba abathengi babo banokusebenzisa ukuthengisa imiyalezo okanye usetyenziso lweselfowuni. Njengoko bafunda amanqaku, ufumanisa ukuba kukho amaqabane okudibanisa, amaqabane ophuhliso, izicelo zomntu wesithathu, kunye nenketho yokhetho.
Okwangoku, ibingayi kuba yinto entle ukuba ishishini lakho- ngubani ophuhlisa ukudityaniswa okunzima kweenkampani zeFintech ebekhona ekubancedeni baqonde ubunzima bengxaki? Impendulo elula kukuba ewe. Ayilothuba lokukhuthaza izisombululo zakho (okwangoku), kukunika isikhokelo kubo ukubanceda baphumelele emsebenzini wabo nakwishishini labo.
Ukuba wakhe ezona zikhokelo zibanzi malunga nokuchongwa kwengxaki kwaye wabonelela ngophando oluxhasayo-ithemba esele liqonda ukuba uyayiqonda ngokupheleleyo ingxaki yabo, icandelo labo, kunye nemiceli mngeni abajongana nayo. Inkampani yakho sele inexabiso kwithemba lakho kwaye inkampani yakho isekuqaleni kokwakha igunya kunye nokuzithemba kubo.
Amanqanaba oTyelelo lokuThenga kunye neThala leeNcwadi lakho
Ezi zigaba mazifakwe kwilayibrari yakho yomxholo. Ukuba ufuna ukwenza ikhalenda yomxholo, ukuqala ngamanqanaba ohambo lwabathengi bakho kubalulekile ekucwangciseni kwakho. Nanku umzekeliso omkhulu wento ejongeka njengokuHlaziya kwe-CSO kaGartner:
Isigaba ngasinye kufuneka sichithwe phantsi kuphandwe nzulu ukuze kuqinisekiswe ukuba umxholo welayibrari unamaphepha, imifanekiso, iividiyo, izifundo zetyala, ubungqina, uluhlu lokutshekisha, iikhalityhuleyitha, amaxesha ... yonke into enxulumene nokubonelela umthengi wakho we-B2B nge ulwazi olufunekayo ukubanceda.
Ilayibrari yakho yomxholo kufuneka icwangciswe kakuhle, ikhangeleke ngokulula, ibhalwe uphawu ngokuchanekileyo, ibhalwe ngokufutshane, ibe nophando oluxhasayo, ifumaneke kumajelo (okubhaliweyo, kwimifanekiso, kwividiyo), uninzi lwayo lulungiselelwe iselfowuni, kwaye lubonise ukuhambelana kwabathengi ukufuna.
Eyona njongo iyonke yemizamo yakho yokuthengisa kufuneka ibe kukuba umthengi wakho angaqhubela phambili kangangoko anqwenela kuhambo lomthengi ngaphandle kwesidingo sokunxibelelana nenkampani yakho. Amathemba aya kufuna ukuhamba kakhulu kula manqanaba ngaphandle koncedo lwabasebenzi bakho. Ngelixa ukwazisa abasebenzi bakho kwangoko kumanqanaba kunokuba luncedo, akusoloko kunokwenzeka.
Ukubandakanya iinzame ze-omni-channel zentengiso kubaluleke kakhulu kwisakhono sakho sokuvala eli shishini. Ukuba ithemba lakho alinakufumana uncedo abaludingayo lokwazisa kunye nokuqhubela phambili uhambo lwabo, uya kuba nakho ukubalahlekisela umntu okhuphisana naye owenze njalo.
tags: b2bUhambo lomthengi lwe-b2bUhambo lwabathengi lwe-b2bUhambo lomthengiukudala imvumelwanocso hlaziyauhambo lwabathengiumlingisiUkuchongwa kwengxakiiimfuno zokwakhaisisombululo sokuhlolaUkuqinisekiswa kwesisombululoUkukhethwa komthengisi